डिसेम्बर भिसा बुलेटिन: अमेरिकी नागरिकका दाजुभाई दिदीबहिनीलाई ग्रिनकार्ड १४ बर्ष ३ महिनामा
अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालय ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले डिसेम्बरको भिसा बुलेटिन जारी गरेको छ । आज जारी गरेको भिसा बुलेटिन अनुशार अमेरिकी नागरिकका दाजुभाई दिदीबहिनीलाई नोभेम्बरमा ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्न लाग्ने अवधि १४ बर्ष ३ महिना रहेको छ ।
नोभेम्बरको भिसा बुलेटिनका तुलनामा प्राथमिकता मितिमा कुनै फेरबदल नहुँदा अमेरिकी नागरिकका दाजुभाई दिदीबहिनीलाई नोभेम्बरमा ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्न लाग्ने अवधि १४ बर्ष ३ महिना पुगेको हो । नोभेम्बरमा यो अवधि १४ बर्ष २ महिना रहेको छ ।
सन् २००६ को सेप्टेम्बर २२ भन्दा अगाडि नै आवेदन दिएका अमेरिकी नागरिकका दाजुभाई दिदीबहिनीहरुले डिसेम्बरमा ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अमेरिकामा हुनेहरुका सन्दर्भमा भने सन् २००७ को सेप्टेम्बर १५ भन्दा अगाडि आवेदन दिएकाहरुले डिसेम्बरका स्टाटस एड्जस्टका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यो मिति पनि नोभेम्बरको तुलनामा कुनै फेरबदल भएको छैन ।
अमेरिकामा नै स्टाटस एड्जस्ट गर्नका लागि विगतका गैरकानुनी उपस्थीति भएको हुनुहुँदैन । डिसेम्बरको भिसा बुलेटिन अनुशार भारतीयहरुका लागि भने यो श्रेणीमा ग्रिनकार्ड पाउनका लागि लाग्ने अवधि झण्डै ८ महिना घटेर साढे १५ बर्षमा झरेको छ ।
सेप्टेम्बरदेखि नै अमेरिकी नागरिकका दाजुभाई दिदीबहिनीलाई ग्रिनकार्ड पाउने प्राथमिक मितिमा कुनै फेरबदल नआएपछि यो अवधि बढ्दै गएको हो । अगस्तको तुलनामा भने सेप्टेम्बरमा २ साता पछाडि सरेको थियो । तर त्यसपछि पछाडि नसरेका कारण अमेरिकी नागरिकका दाजुभाई दिदीबहिनीलाई ग्रिनकार्ड पाउन लाग्ने अवधि ४ महिना बढ्न पुगेको छ ।
गतबर्षको नोभेम्बरमा अमेरिकी नागरिकका दाजुभाई दिदीबहिनीहरुले ग्रिनकार्ड पाउन लाग्ने अवधि १२ बर्ष १० महिनामात्र रहेकोमा अहिले त्यसमा झण्डै डेढबर्ष बढेको छ ।
ग्रिनकार्ड फाइल गरेपछि ग्रिनकार्ड स्वीकृत नहुँदासम्म अमेरिका जानै नपाइने ?
तर नेपालीहरुले दाजुभाई दिदीबहिनी श्रेणीको ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्नका लागि झण्डै १४ बर्षको अवधि लाग्ने गरेको छ । के यो श्रेणीको ग्रिनकार्डका लागि आवेदन गरेपछि १४ बर्षसम्म अमेरिका जान नै नपाइने हो त ? यसबारे काठमाडौंमा रहेको अमेरिकी दूतावासले भनेको छ – ‘यदि तपाईको ग्रिनकार्ड आवेदन पेन्डिङ अवस्थामा छ भने उक्त आवेदनका कारण अमेरिकाको भिजिटर भिसाका लागि स्वत अयोग्य भईदैन ।’
दूतावासले भनेको छ – ‘तर आप्रवासी भिसा आवेदनको अर्थ तपाई अमेरिकामा स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने आशय मानिन्छ । तर पर्यटक भिसाको एउटा प्रावधानमा तपाई अमेरिका घुमेपछि नेपाल फर्कने बलियो आधार र सम्बन्ध हुनुपर्छ ।’
यदि तपाईको उमेर २१ बर्ष पूरा भइसकेको छ र तपाईसँग अमेरिकी नागरिकता छ भने तपाईले आफ्ना दाजुभाई दिदीबहिनीहरुको अमेरिकी ग्रिनकार्डका लागि फाइल गर्न सक्नुहुन्छ । यो फर्म अनलाइनबाट पनि भर्न सकिन्छ । अनलाइनबाट भर्दा युएससीआईएसमा अनलाइन एकाउन्ट बनाउनुपर्छ ।
हुलाकबाट फर्म पठाएर भर्नेहरुका लागि :